क्रिकेट – Page2– My Blog
७५ रन बनाई पारस भए आउट !!
स्पोर्ट्स खबर : आई सी सी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्षेनोट प्रतियोगीता अन्तर्गत अहिले नेपाल र अफगानिस्थान सामना गर्दै छन् । लगातार दुई खेलमा हार व्यहोरेको नेपालका लागि अबको दुई खेल जित्नै पर्ने दबाब छ ।
अहिलेको खेल बुलायो अत्थेलेटीक क्लबको मैदानमा हुदैछ । खेलको कुरा गर्दा, खेलको ३.६ ओबर मा अनिल १३ बल खेल्दै ७ रन जोडी पबेलीयन फर्केका थिए ।
तेसपछि पारस खड्का ब्याटिंग गर्न मैदान छिरेका थिए । मैदान छिरेक पारशले ८२ बल खेल्दै १० चौका १ छक्का हानी ७५ रन जोड्न सफल भइ आउट भएका छन् ।
ज्ञानेन्द्र मल्लले भने पारस भन्दा अगाडिनै ६९ बल खेली २ चौका संगै २३ रन बनाइ आउट भएका थिए ।
अहिले ब्याटिंगका लागि दिपेन्द्र अनि रोहित कुमार मैदानमा छन्
२३ रन बनाई ज्ञानेन्द्र मल्ल भय आउट !!
तेसपछि पारस खड्का ब्याटिंग गर्न मैदान छिरेका थिए । अहिले सम्म पारशले ७६ बल खेल्दै १० चौका १ छक्का हानी ७३ रन जोड्न सफल भएका छन् भने ज्ञानेन्द्र मल्लले भने ६९ बल खेली २ चौका संगै २३ रन बनाइ आउट भएका छन् ।
अहिले ब्याटिंगका लागि दिपेन्द्र अनि पारस मैदानमा छन्
पारसको ७० रन पुरा !!
तेसपछि पारस खड्का ब्याटिंग गर्न मैदान छिरेका थिए । अहिले सम्म पारशले ७१ बल खेल्दै १० चौका १ छक्का हानी ७० रन जोड्न सफल भएका छन् भने ज्ञानेन्द्र मल्लले भने ६५ बल खेली २ चौका संगै जम्मा २२ रन बनाउन सफल भएका छन् ।
पारसको ८ ओटा चौका १ छक्का संगै नेपालको ९० रन पुरा !
तेसपछि पारस खड्का ब्याटिंग गर्न मैदान छिरेका थिए । अहिले सम्म पारशले ६५ बल खेल्दै ८ चौका १ छक्का हानी ५९ रन जोड्न सफल भएका छन् भने ज्ञानेन्द्र मल्लले भने ६१ बल खेली २ चौका संगै जम्मा २१ रन बनाउन सफल भएका छन् । पारसले अहिले सम्म
UPDATE : विश्वकप क्रिकेट छनोट : नेपालले अफगानिस्तानसंग सामना गर्दै
विश्वकप क्रिकेट छनोट अन्तर्गत नेपालले अहिले अफगानिस्तानको सामना गर्दैछ । लगातार दुई खेलमा हार व्यहोरेको नेपालका लागि अबको दुई खेल जित्नै पर्ने दबाब छ ।
सुपर सिक्समा पुग्ने नेपालको लक्ष्य अबको दुई खेलमा निर्भर हुने छ । नेपालले अफगानिस्तानसँग आज गर्ने प्रतिष्पर्धा अर्थपूर्ण रहेको छ । अफगानिस्तानका लागि पनि समूह चरणको अन्तिम खेल महत्वपूर्ण हुनेछ । जिम्बाब्वेविरुद्ध निकै कमजोर प्रदर्शन गरेको नेपालले स्कटल्याण्डविरुद्ध सम्हालिएको प्रदर्शन गरेको थियो । तर, भरपर्दा ब्याट्सम्यानहरुको प्रदर्शन विर्सनलायक हुँदा स्कटल्याण्डसँग हार्न पुग्यो । बलिङतर्फ भने पहिलो खेलको तुलनामा निकै सुधारिएको रह्यो । तुलानात्मक रुपमा अफगानिस्तान चर्को दबावमा हुनेछ, जसको लाभ नेपालले पाउनसक्छ । तर, यसका लागि ब्याटिङमा प्रशस्त सुधार त जरुरी छ नै बलिङ र फिल्डिङमा पनि चुस्त रहनु पर्नेछ ।
दुई खेलमा नेपालको फास्ट बलिङ कमजोर देखिएको छ । त्यसैले नेपालले दुई खेलमा केवल एक फास्ट बलर सोमपाल कामीलाई खेलाएर बाँकी तीन स्पिनर खेलाएको थियो । तर, सोमपालको प्रदर्शन पनि बिर्सनलायक छ ।
काठमाडौं । आइसीसी विश्वकप क्रिकेट छनोट प्रतियोगिताअन्तर्गत् नेपालले आफ्नो तेस्रो खेलमा चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी अफगानिस्तानको सामना गर्नेछ ।
जिम्बाब्वेमा जारी उक्त प्रतियोगितामा नेपालले शनिबार बुलावायोस्थित एथ्लेटिक क्लबमा नेपाली समयानुसार दिउँसो १ः१५ बजे अफगानिस्तानको सामना गर्नेछ ।
एक दिवसीय खेलमा नेपाल र अफगानिस्तान अहिलेसम्म सातपटक भिडेका छन् । अफगानिस्तान ६ खेलमा र नेपाल एउटा खेलमा विजयी भएको छ ।
‘सुपर सिक्स’मा आफनो स्थान सुरक्षित गर्नका लागि नेपाललाई उक्त खेल जित्नैपर्ने दबाब छ । लगातार दुई खेलमा नेपालले हार व्यहोरेको छ ।
नेपालले एक दिवसीय मान्यता पाउनका लागि बाँकी दुबै खेल जित्नैपर्ने हुन्छ । नेपाल पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेसँग ११६ रन तथा दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डसँग चार विकेटको हारेको थियो ।
टेस्ट राष्ट्रको मान्यता पाइसकेको अफगानिस्तान स्कटल्यान्ड, जिम्बाब्वे र हङकङसँग पराजित भइसकेको छ । अफगानिस्तानको सुपर सिक्समा पुग्ने गणितीय आधारमात्र बाँकी छ । नेपालले अफगानिस्तानसँगै हङकङसँग खेल्न बाँकी छ ।
प्रतियोगितामा दुवै समूहबाट शीर्ष तीन स्थानमा रहने टोली सुपर सिक्समा पुग्नेछन् र त्यसबाट शीर्ष दुई टोली छनोट भइ विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि छनोट हुनेछन् । रासस
नेपालको लगातार दोस्रो पराजय, कप्तान पारस खड्काले नेपाललाई लज्जास्पद अवस्थामा पुग्नबाट भने बचाए
काठमाडौं। नेपालले आइसीसी एक दिवशीय विश्वकप छनोट क्रिकेटको समूह बीको दोस्रो खेल पनि गुमाएको छ । स्कटल्याण्डविरुद्धको खेल नेपालले चार विकेटले गुमाएपछि नेपालका लाग अब अगाडिको यात्रा कठिन बनेको छ । स्कटल्याण्डले नेपाललले दिएको एक सय पचास रनको लक्ष्य स्कटल्याण्डले ५१ बल बाँकी हुँदा ६ विकेटमा पूरा गरेर नेपाललाई निराश पा¥यो ।
नेपालले दिएको लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा स्कटल्याण्डका प्रारम्भिक व्याट्सम्यान किले जेम्स कोएट्जरले ६३ रन बनाएका थिए । नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले र वसन्त रेग्मीले समान दुई , दीपेन्द्र सिंह ऐरीले र ललित राजवंशीले समान एक एक विकेट लिएका थिए । प्रारम्भिक अवस्थामा नै खराब चरण गुजारेको नेपालले अन्तत केही हदसम्म आफुलाई सम्हाल्दै लज्जास्पद अवस्थाबाट भने बचायो ।
जिम्बाबेमा जारी आईसीसी एक दिवशीय विश्वकप छनोट क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत स्कटल्याण्डविरुद्धको खेलमा नेपालको सुरुवात खराब रहयो । यद्धपि कप्तान पारस खड्काले कप्तानी पारी खेल्दै नेपालको अवस्थालाई सम्हालेका थिए । जस्लाई पछिल्ला क्रमका व्याट्सम्यानहरुले केही हदसम्म राहत थपे । नेपालले ४७ ओभरमा सवै विकेट गुमाउँदै १ सय ४९ रन बनाएको थियो । एक समय नेपालको यो अवस्था पनि असम्भव झै देखिएको थियो ।
पहिलो पाँच ओभरमा नै पाँच विकेट गुमाउदाको नाजुक अवस्थाबाट नेपाललाई बचाएर कप्तान खड्काले अर्धशतकीय योगदान मात्र पूरा गरेनन् लिस्ट ए खेलमा एक हजार रन नघाउने पहिलो नेपाली खेलाडी समेत बनेका छन् । जिम्बाबेको वुलयाओ स्थित क्वीन्स स्पोट्र्स क्लबको मैदानमा जारी खेलमा कप्तान खड्काले ६८ बलमा ८ चौकाको सहयोगमा ५० रन पूरा गरेर नेपाललाई लज्जास्पद अवस्थाबाट वचाउने प्रयास गरेका थिए ।
कप्तान खड्काले ७५ बलमा ९ चौकाको सहयोगमा ६३ रन बनाएर बाहिरिएका थिए । निकै खराब सुरुवात गरेको नेपालले दोस्रो ओभरमा नै एक रन जोड्दा प्रारम्भिक व्याट्सम्यान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई गुमाएको थियो । उनी एक रन बनाएर बोल्ड आउट भएका थिए भने मल्लको बर्हिगमन पछि नेपाल विकेट झर्ने क्रम निरन्तर बनेको थियो नेपालले दोस्रो ओभरमा नै दिलिपनाथलाई गुमाएको थियो भने दीपेन्द्र सिंह ऐरी एक रन , शरद भेषवाकर शून्य र आरिफ शेख दुई रन बनाएर बाहिरिएका छन् ।
सोमपााल कामीले भने ५४ बलको सामना गरेर दुई चौकाको सहयोगमा १८ रन बनाएर पारसलाई राम्रो साथ दिने प्रयास गरेका थिए । सोमपाल कामी पछि रोहित कुमार पौडेल १५ रनको योगदान गरे । यस्तै सन्दीप लामिछाने ६ रन बनाएर वाहिरिदा,वसन्त रेग्मीले २४ रनको उत्कृष्ट योगदान गर्दा ललित राजवंशीले ४ रन बनाए । स्कटल्याण्डका लागि एसजी विटिङघमले नेपालको महत्वपूर्ण तीन विकट लिदा एसएम सरिफले एसी इभान्सले समान २÷ २, आरडी वेरिङटनले र टिबी सोलेले समान एक एक विकेट लिएका छन् ।
विश्वकप छनोटमा लज्जास्पद अवस्थामा पुगेको नेपाललाई कप्तान पारस खड्काले बचाए, नेपालले दियो स्कटल्याण्डलाई १ सय ५० रनको लक्ष्य
काठमाडौं । प्रारम्भिक अवस्थामा नै खराब चरण गुजारेको नेपालले अन्तत केही हदसम्म आफुलाई सम्हाल्दै लज्जास्पद अवस्थाबाट बचाएको छ । जिम्बाबेमा जारी आईसीसी एक दिवशीय विश्वकप छनोट क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत स्कटल्याण्डविरुद्धको खेलमा नेपालको सुरुवात खराब रहयो ।
यद्धपि कप्तान पारस खड्काले कप्तानी पारी खेल्दै नेपालको अवस्थालाई सम्हालेका थिए । जस्लाई पछिल्ला क्रमका व्याट्सम्यानहरुले केही हदसम्म राहत थपे । नेपालले ४७ ओभरमा सवै विकेट गुमाउँदै १ सय ४९ रन बनाएर स्कटल्याण्डका लागि १सय ५० रनको लक्ष्य छोडेको छ । पहिलो पाँच ओभरमा नै पाँच विकेट गुमाउदाको नाजुक अवस्थाबाट नेपाललाई बचाएर कप्तान खड्काले अर्धशतकीय योगदान मात्र पूरा गरेनन् लिस्ट ए खेलमा एक हजार रन नघाउने पहिलो नेपाली खेलाडी समेत बनेका छन् ।
जिम्बाबेको वुलयाओ स्थित क्वीन्स स्पोट्र्स क्लबको मैदानमा जारी खेलमा कप्तान खड्काले ६८ बलमा ८ चौकाको सहयोगमा ५० रन पूरा गरेर नेपाललाई लज्जास्पद अवस्थाबाट वचाउने प्रयास गरेका थिए । कप्तान खड्काले ७५ बलमा ९ चौकाको सहयोगमा ६३ रन बनाएर बाहिरिएका थिए । निकै खराब सुरुवात गरेको नेपालले दोस्रो ओभरमा नै एक रन जोड्दा प्रारम्भिक व्याट्सम्यान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई गुमाएको थियो । उनी एक रन बनाएर बोल्ड आउट भएका थिए भने मल्लको बर्हिगमन पछि नेपाल विकेट झर्ने क्रम निरन्तर बनेको थियो नेपालले दोस्रो ओभरमा नै दिलिपनाथलाई गुमाएको थियो भने दीपेन्द्र सिंह ऐरी एक रन , शरद भेषवाकर शून्य र आरिफ शेख दुई रन बनाएर बाहिरिएका छन् ।
सोमपााल कामीले भने ५४ बलको सामना गरेर दुई चौकाको सहयोगमा १८ रन बनाएर पारसलाई राम्रो साथ दिने प्रयास गरेका थिए । सोमपाल कामी पछि रोहित कुमार पौडेल १५ रनको योगदान गरे । यस्तै सन्दीप लामिछाने ६ रन बनाएर वाहिरिदा,वसन्त रेग्मीले २४ रनको उत्कृष्ट योगदान गर्दा ललित राजवंशीले ४ रन बनाए । स्कटल्याण्डका लागि एसजी विटिङघमले नेपालको महत्वपूर्ण तीन विकट लिदा एसएम सरिफले एसी इभान्सले समान २/ २, आरडी वेरिङटनले र टिबी सोलेले समान एक एक विकेट लिएका छन् ।
सन्दिपले दिलाए नेपाललाई तेस्रो विकेट
२४ फागुन, काठमाडौं । विश्वकप छनोट क्रिकेटमा नेपालले स्कटल्याण्डसामू १५० रनको लक्ष्य दिएको छ ।
जवाफमा मैदान उत्रिएको स्कटल्याण्डले तेस्रो विकेट गुमाएको छ । सन्दिप लामिछानेले रिची बेरिङटनलाई मात्र १ रनमा एलबीडब्लू धरापमा परे ।
अघिल्लो ओभरमा बसन्त रेग्मीले क्यालम मेकलाउडलाई व्यक्तिगत १५ रनमा आउट गरेका थिए । पहिलो विकेट सन्दिपले लिएका हुन् । दशौं ओभरको तेस्रो बलमा उनले म्याथु क्रसलाई कप्तान पारस खड्काको हातबाट क्याच गराएका हुन्
उनी व्यक्तिगत १४ रनमा आउट भए ।
क्रिकेट अपडेट :कप्तान पारस खड्का पनि बाहिरिएपछि स्कटल्याण्डविरुद्ध नेपाल नाजुक अवस्थामा
काठमाडौं। कप्तान पारस खड्काले कप्तानी भूमिका निर्वाह गर्दा नेपाल स्कटल्याण्डविरुद्ध जारी एक दिवशीय विश्वकप छनोट खेलमा लज्जास्पद अवस्थाबाट बच्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
पहिलो पाँच ओभरमा नै पाँच विकेट गुमाउदाको नाजुक अवस्थाबाट नेपाललाई बचाएर खड्काले अर्धशतकीय योगदान मात्र पूरा गरेनन् लिस्ट ए खेलमा हजार रन नघाउने पहिलो नेपाली खेलाडी समेत बनेका छन् ।
जिम्बाबेको वुलयाओ स्थित क्वीन्स स्पोट्र्स क्लबको मैदानमा जारी खेलमा कप्तान खड्काले ७५ बलमा ९ चौकाको सहयोगमा ६३ रन पूरा गरेर बाहिरिएका थिए । निकै खराब सुरुवात गरेको नेपालले दोस्रो ओभरमा नै एक रन जोड्दा प्रारम्भिक व्याट्सम्यान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई गुमाएको थियो ।
उनी एक रन बनाएर बोल्ड आउट भएका थिए भने मल्लको बर्हिगमन पछि नेपाल विकेट झर्ने क्रम निरन्तर बनेको थियो नेपालले दोस्रो ओभरमा नै दिलिपनाथलाई गुमाएको थियो भने दीपेन्द्र सिंह ऐरी एक रन , शरद भेषवाकर शून्य र आरिफ शेख दुई रन बनाएर बाहिरिएका छन् ।
सोमपााल कामीले भने ५४ बलको सामना गरेर दुई चौकाको सहयोगमा १८ रन बनाएर पारसलाई राम्रो साथ दिने प्रयास गरेका थिए । नेपालले पहिलो पाँच ओभरको खेल समाप्तीसम्म पाँच विकेट गुमाएर मात्र ३९ रन जोडेको थियो । पहिलो पाँच ओभरमा नै महत्वपूर्ण पाँच विकेट गुमाएको नेपालको अवस्था अझै पनि दयनीय छ ।
नेपालले २७ ओभर एक बलमा ७ विकेटको क्षतिमा १०५ रन मात्र जोडन सफल भएको छ । स्कटल्याण्डका लागि एसजी विटिङघमले नेपालको महत्वपूर्ण तीन विकट लिदा एसएम सरिफ र आरडी वेरिङटनले समान एक एक विकेट लिएका छन् ।